५ राम्रा कोरियन फिल्म, युट्युबमा अंग्रेजी सबटाइटलसहित :: Setopati
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, चैत २३
'लिटल फरेस्ट'को दृश्य।
थ्रिलर, प्रेम, राजनीतिदेखि जीवन दर्शनसम्मका विषयमा उत्कृष्ट फिल्म बनाउँदै आएको कोरियाका केही राम्रा फिल्म युट्युबमा अंग्रेजी सबटाइटलसहित हेर्न पाइन्छ। यहाँ कोरियाका प्रतिनिधि पाँच निर्देशकका फिल्म सिफारिश गरिएको छ।
लिटल फरेस्ट (२०१८) - निर्देशक यिम सुन राय
जंगलमा चराचुरूंगीको चिरबिर आवाज सुन्दै जाने बाटोबाट पुगिन्छ, मि सुङ ली गाउँ। यो स्याउ र चामल प्रशस्त उब्जने गाउँका रूपमा चिनिन्छ। यहाँका मान्छे केही किन्न परे सहर पुग्नुपर्छ। यसका लागि एक घन्टाको बाटो आउजाउ गर्नुपर्छ।
यो सोङ हे वोन हुर्किएको गाउँ हो। उच्चशिक्षाका सिओल पुगेकी उनी त्यहाँ सन्तुष्ट हुन सक्दिनन्। पढाइ, काम र सम्बन्धका कारण उनी आफ्नै गाउँ फर्किन्छिन्। सहरको भागदौडभन्दा परको यो ठाउँ शान्त र सुन्दर छ। तर उनको घर रित्तो छ। उनकी आमाको पत्तो छैन। उनीसँग आमाले लेखेका चिठी र बाल्यकालीन याद भने प्रशस्तै छन्।
एकल आमासँग हुर्किएकी सोङको गाउँमा उनका दुई बाल्यकालीन साथी छन्। जे हा बैंकमा काम गर्छिन् र गाउँबाट कहिल्यै बाहिर उम्कौं भन्ने सोचेर बसेकी छिन्। तर अर्को साथी युन सुक भने केही समय सहरमा बसेर फर्केका पात्र हुन्। उनी कृषकका रूपमा गाउँमै बस्न चाहन्छन्। सहर र गाउँप्रतिको आकर्षण यी दुई पात्रमा महशुस गर्न सकिन्छ।
सोङ हे वोन आफैं भने दुविधामा छन्। उनी गाउँमा टिक्छिन् टिक्दिनन् यसका लागि फिल्म हेर्नैपर्ला। के सोङ र उनकी आमाको भेट होला?
यी सबै अहिल्यै थाहा नपाए पनि यत्ति चाहिँ भनौं, यो फिल्ममा आमा छोरीको प्रेम र मित्रतासँगै खानेकुरा पनि केन्द्रमा छ। सोङ खाना भनेपछि हुरुक्कै हुन्छिन्। उनकी आमालाई जस्तै उनलाई पनि मीठा परिकार पकाउने सोख छ। फिल्ममा खानेकुराका परिकार देखेरै मुख रसाउँछ।
चारै ऋतुका भिन्न भिन्न रंगले आँखा लोभ्याउँछ। प्राकृतिक फलफूल होस्, चाहे फराकिला फाँट र बारी, सिनेमाटोग्राफीले त्यसको सौन्दर्यलाई मज्जाले खिचेको छ। पात्रको जीवनलाई जस्तै दर्शकलाई पनि फिल्मले प्रकृतिको नजिकै पुर्याइदिन्छ।
ठूला घटनाक्रमबिनै खाँदै खेल्दै 'लिटल फरेस्ट' फिल्मले कृत्रिम विकास र प्राकृतिक सौन्दर्यको तुलना गर्ने ठाउँ दिन्छ।
पोयट्री (२०१०) -निर्देशकः ली चाङ दोङ
'पोयट्री'को पहिलो दृश्यमै खोलामा बगिरहेको युवतीको लास देखिन्छ। ती युवती ६० नाघेकी मिजाका नातिसँगै पढ्थिन्। युवतीले खोलामा हाम्फाल्नुअघि डायरीमा आफूलाई बलात्कार गर्ने छ जना केटाहरूको नाम लेखेकी थिइन्, जसमध्ये मिजाका नाति पनि एक हुन्।
सबै केटाका अभिभावक भेला भएर केटीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएर मुद्दा सल्टाउने सल्लाह भए पनि मिजा आफ्नो भागमा परेको पाँच लाख कहाँबाट जुटाउने भनेर चिन्तित छिन्।
अर्काको घरमा काम गरेर जीवन धानिरहेकी मिजाले नातिको खबर अर्को सहरमा बस्ने उनकी आमासँग लुकाएरै टार्ने ठानिरहेकी छिन्। योबाहेक मिजाको जीवनमा अर्को पनि संकट छ। उनी विस्तारै नामहरू भुल्न थालेकी छिन्। स्मृति हराउने रोग 'अल्जाइमर'को संकेत देखिइसकेको छ।
यत्तिका संकटबीच पनि मिजामा बुढेसकालमा कविता लेख्ने धून सवार छ। उनी कविता सिक्ने कक्षा र कविता वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेकी छिन्।
फूल र प्रकृतिमा कविताको स्रोत खोजी हिँड्ने उनी मौका पाउनासाथ जानकारहरूलाई सोधिरहन्छिन्, 'कविता कसरी लेख्ने?'
कविता र उनको जिन्दगीको कथा सँगसँगै कसरी हिँड्ला? के उनी उनको नातिलाई बचाउन पैसा जुटाउन सक्लिन्? के मिजाले कविता लेख्न सक्लिन्?
लेखिन् भने, उनले लेख्ने कविता कस्तो होला? यी प्रश्नको जवाफ फिल्मले पक्कै दिनेछ।
निर्देशक ली चाङ दोङको निर्देशनको यो फिल्म हेरेपछि फिल्मको कथा र मुख्य पात्रको संवेदनाले धेरै दिन, सायद धेरै वर्षसम्म छोइरहनेछ।
एकातिर अनेक दुःखले गुम्सिएको व्यक्तित्व, अर्कोतिर चिटिक्क परेर हिँड्नु पर्ने, फूल देखेर रमाउने, केही फुर्‍यो कि डायरीमा टिपिहाल्ने मिजास भएकी मिजा। उनको अभिनय यो फिल्मको शक्तिशाली पक्ष हो।
कथा, प्रस्तुति र अभिनय धेरै हिसाबले सशक्त फिल्म हो, पोयट्री।
मदर (२००९)- निर्देशकः बोङ जोन हु
'प्यारासाइट' बनाउनुअघि नै बोङ जोन हुलाई चिनाउने केही फिल्ममध्ये एक हो, 'मदर'। यो 'मर्डर-मिस्ट्री' फिल्म प्यारासाइटजस्तै 'सर्प्राइजिङ' छ। कथाले कुन बेला कस्तो मोड लिन्छ, भेउ पाउनै गाह्रो। फिल्म हेरून्जेल के होला भन्ने कौतुहल रहिरहन्छ।
दक्षिण कोरियाको दक्षिणी भेगको एउटा गाउँमा जडीबुटी बेच्ने र बिना लाइसेन्स अकुपंचरको सेवा दिने महिला छन्। उनको परिवारमा उनी र २२ वर्षे छोरा दो जुन छन्। छोराको मानसिक स्थिति सुस्त छ। फिल्मको सुरूआती केही दृश्यमै छोरालाई गाडीले ठक्कर दिँदा होस् वा खाना खुवाउँदा छोराप्रति आमाको माया कति धेरै छ, दर्शकलाई महशुस भइहाल्छ।
एक दिन त्यही छोरालाई प्रहरीले एउटी युवतीको हत्याको अभियोगमा पक्राउ गर्छ। यो घटनापछि आमाको दिनचर्या र मानसिक अवस्था विथोलिन्छ। उनी छोरा निर्दोष छ भन्ने प्रमाणित गर्न हत्याराको खोजीमा सक्रिय हुन्छिन्। यसक्रममा कथाले झनै रोचक मोड लिँदै जान्छ। के उनी छोरालाई निर्दोष साबित गर्न हत्यारासम्म पुग्न सफल होलिन्?
यसको जवाफ फिल्म हेरेरै थाहा पाउँदा रमाइलो हुन्छ।
सुरूदेखि नै केही रहस्य लुकेको महशुस गराउन यसमा पात्रका हाउभाउ र क्यामराको एंगललाई पनि सोहीअनुसार प्रयोग गरिएको छ। ओठभन्दा पात्रका आँखा बोल्छन्। पात्रको आधा अनुहार मात्र देखाएर क्यामराको प्रयोगले कथा रहस्यमयी बनाउन सघाएको छ।
पहिलो दृश्य र अन्तिम दृश्यको नृत्य सांकेतिक र दार्शनिक छ। सुरूमै आउने गाडी दुर्घटनाले पनि कथामा आउने सम्भावित दुर्घटनाहरूलाई संकेत गर्छ। फिल्ममा आमाको भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्य पात्र किम हाय जाको अभिनय शानदार छ। उनी कोरियन टेलिभिजन शृंखलाकी 'मदर फिगर' हुन्।
निर्देशकले उनको 'मदर'मा नितान्त नयाँ अवतारमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनको अभिनयले दर्शकको मन जित्छ। 'प्यारासाइट'का यी निर्देशकको अर्को चर्चित फिल्म 'स्नोपिअर्सर' युट्युबमा अंग्रेजी भाषामै हेर्न पाइन्छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २३, २०७६, १०:१०:००
रिता भण्डारीको ‘तिम्रो काखमा’ गीत बजारमा
काठमाण्डौमा 'मिसेस नेपाल वर्ल्ड' आयोजना हुँदै